Nafaqeynta kalsiyum-magnesium iyo deoxidation ciidda si dammaanad ah wax-soo-saarka sare ee dalagyada yar yar - Journal "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga News Wararka shirkadda
в Talobixin takhasus leh, Wararka shirkadda
Nidaamka bacriminta dalagga ee beeraha casriga ah, sida caadiga ah, waxaa ka mid ah hordhaca nafaqooyinka ugu muhiimsan - nitrogen, fosfooraska, potassium; marmarka qaarkood bacriminta dabiiciga ah ayaa lagu dabaqaa hal mar wareeggii dalagga; iyo microelements, oo inta badan loo isticmaalo dhaymada sare.
Si kastaba ha ahaatee, si buuxda u xaqiijinta wax-soo-saarka iyo tayada tayada ee noocyada iyo Beelaha, isticmaalka dheeraadka ah ee mesoelements, sida calcium iyo magnesium, ayaa loo baahan yahay. Labadan walxood waxay door muhiim ah ka ciyaaraan noolaha dhirta: waxay kiciyaan horumarinta nidaamka xididka, waxay saameyn togan ku yeeshaan koritaanka qaybaha anteenada, waxay ka qayb qaataan habka photosynthesis, hoos u dhigista gabowga dhirta waxayna kordhiyaan caabbinta cudurada. Ciidda dhexdeeda, muhiimadda calcium iyo magnesium si dhib leh looma qiyaasi karo, maadaama ay yihiin ilaaliyaha bacriminta. Inta badan waxaa lagu soo bandhigaa qaabka karbohidratka.
Waayida kaarboonaydhyada ka soo baxa dheecaanka iyo ka saarista dhirtu waxay gaaraysaa boqollaal kiilogaram oo aan la bedeli karin sannadkii, taas oo si xun u saamaysa wax soo saarka dalagga.
Badeecooyin cusub oo Omia ah ayaa ka soo muuqday Ruushka - Calcipril iyo Magprill, kuwaas oo si guul leh u magdhabay la'aanta karbohaydraytyada oo si wax ku ool ah u deoxidize ciidda. Dalagyada xasaasiga ah sida baradhada, xididdada sonkorta, digirta, galleyda, isticmaalka Omia Magprill. On carradu acidic, marka codsanaya Omia Magprill, taas oo ka kooban 25% calcium iyo 9% magnesium, ma aha oo kaliya sifooyinka jirka iyo kiimikaad ee ciidda hagaajinaysaa ay sabab u tahay dhexdhexaad ah ee acidity xad-dhaaf ah, laakiin sidoo kale nafaqada dhirta leh calcium iyo magnesium. Ficilka daroogada (sida bacriminta iyo bacriminta) waxay socotaa dhowr xilli (iyadoo ku xiran qiyaasta iyo habka codsiga), iyo saameynta asaasiga ah waxay dhacdaa 4 toddobaad gudahood ka dib codsiga iyo kala dirida daroogada ee ciidda. Tani waxay suurtogal u tahay xaqiiqda ah in dolomite dabiiciga ah (kaas oo badeecada laga sameeyay) lagu soo bandhigo qaab micronized ah, budada dhogorta leh. Ka dib marka la shiido, budada waa la jarjaray (xajmiga granule 2-6 mm), kaas oo si weyn u fududeynaya codsiga tignoolajiyada oo u oggolaanaya isticmaalka Omia Magprill si aan kala sooc lahayn iyo gudaha.
2021, Omia Magprill oo qiyaas ah 300 kg/ha ayaa lagu tijaabiyay beerista baradhada iyada oo aan waraabin karin gobolka Yaroslavl. Noocyada kala duwan ee Gala waxaa lagu beeray ciidda carrada leh ee ciidda leh. Wax-soo-saarka kantaroolku wuxuu ahaa 28,2 t/ha, marka loo eego kala duwanaanshaha Magprill - 30,8 t/ha, kaas oo ah 2,6 t ama 9,2% ka badan.
wax soo saarka Qiyaasta, kg/ha Qiimaha alaabta, rub/ha Korodhka wax-soo-saarka, t/ha Qiimaha dalagga dheeriga ah, rub/ha Dakhli dheeri ah, rub/ha
Magprill, KFH "Magro", gobolka Yaroslavl 300 8487 2,6 26000 17513
Korodhka wax-soo-saarka wuxuu ku dhacaa labadaba sababtoo ah kororka guud ee tirada digriiga, iyo sababtoo ah dhalidda weyn ee jajab weyn, taas oo ah tilmaame tayada lagama maarmaanka u ah baradhada suuqa.
Xisaabinta waxay isticmaashay qiimaha hadda ee Omia Magprill iyo celceliska qiimaha muddada-dheer ee baradhada - 10 rubles / kg. Korodhka ka dhalanaya wax-soo-saarka wuxuu daboolayaa kharashka ku baxa isticmaalka alaabta wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad hesho dakhli dheeraad ah oo ah 17 rubles / ha.
Tags: CalciprilMagprillOmiyacarrada deoxidation
Gobolka Yuzhny LLC waxa uu bixiyaa agabka ilaalinta dhirta noolaha oo wax ku ool ah oo ay soo saartay LLC PO Sibbiopharm. LLC PO "Sibbiopharm" waxay leedahay farsamo ku filan ...
Lyudmila Dulskaya Zolsky Potato LLC (Jamhuuriyadda Kabardino-Balkarian) waxay ku koraysay iniinaha baradhada heerka sare ah ee deegaan aan fayraska lahayn in ka badan 8 sano.
Agrico-Eurasia LLC: barnaamijka wax soo saarka abuurka balaariyay
Lyudmila Dulskaya Agrico-Eurasia LLC waa soo dejiye iyo soo saaraha shatiga ee baradhada shinnida Nederland. Dhammaan qaybaha shirkadu waxay ku yaalaan gobolka Moscow, ee ...
Rosselkhoznadzor wuxuu ka digayaa qatarta wasakhda baradhada ee ku dhacaysa goor dambe ee gobolka Sakhalin
Seddex beerood oo ka tirsan Gobolka Amur, baradhada waxaa saameeya qurxinta giraanta